दिनेशलाइ सार्वजनिक गर्नु अघि भागीरथीक आफन्तले भेटेर २० मिनेट कुरा गर्दा यसो भनेका रहेछन् ! स्कुलले पनि दियो दिनेशको बारेमा पोजेटिभ स्पष्टीकरण ! पुरा पढ्नुहोस – News Nepali Dainik
दिनेशलाइ सार्वजनिक गर्नु अघि भागीरथीक आफन्तले भेटेर २० मिनेट कुरा गर्दा यसो भनेका रहेछन् ! स्कुलले पनि दियो दिनेशको बारेमा पोजेटिभ स्पष्टीकरण ! पुरा पढ्नुहोस
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०६, २०७७ समय: ६:३३:४९
भागरथी प्रकरण आरोपमा पक्राउ परेका दिनेश भट्टले नै ह ‘त्या गरेको प्रमाण सहितको पुष्टि नभएसम्म परिवारले भागरथीको शव नबुझ्ने बताएका छन् ।घटनाको अनुसन्धान गरिपाउ भनी प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुभएका भागरथीका नजिकका काका नाता पर्ने शिवराज भट्टले घटनामा निजको संलग्नता पुष्टि नभएसम्म परिवारले शव नबुझ्ने बताउनुभयो ।
शिवराजले भन्नुभयो, “ दिनेशले ह’ ‘त्या आफैले गरेको स्वीकारे पनि विश्वास गर्ने स्पष्ट आधार नदेखिएकोले पुष्टि नभएसम्म शव नबुझ्ने निर्णय गरेका छौं ।”शिवराजले अगाडि भन्नुभयो,“ दिनेशलाई मैले पनि जिप्रकामा भेटे । एकान्तमा लगेर २० मिनेट जति कुरा गर्दा ह ‘त्या गरेको तर, कर णी नगरेको बताउँदै छ । घटना प्रकृति र पोष्टमार्टम रिपोर्टमा कर णी पछि ज्या न लि’एको भन्ने आएको छ । कसरी विश्वस गर्ने ? पुष्टि हुनुपर्छ ।”
Last Updated on: February 18th, 2021 at 6:33 am
२६१५ पटक हेरिएको